भोली एमाले माओवादी पार्टी एकता घोषणा होला त ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
| सोमवार, कार्तिक ८, २०७८
भोली एमाले माओवादी पार्टी एकता घोषणा होला त ?
Published On : २ जेष्ठ २०७५, बुधबार १६:५७
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गर्न सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार भएको वार्तामा एकता सहमति जुटेको हो । सम्भवत भोलि नै एकता घोषणा हुनेछ ।
एकीकरणअघि दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर मान्युट गरेपछि मात्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिनुपर्छ ।
माओवादीको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठक बस्दैछ भने एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बिहीबार ११ बजे बोलाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्ने सम्भावना छ ।
बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी एकता भएको घोषणा हुन सक्ने माओवादी उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सकेसम्म बिहीबार नै एकीकृत पार्टी ‘नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने दुई दलको तयारी छ । यद्यपि एमाले उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले भने संयोजन समितिको बैठकपछिमात्र टुंगो लाग्ने बताए । उनले दुवै अध्यक्षको भनाइ उधृत गर्दै भने-एकता ‘अन प्र्रोग्रेस’मा छ ।
पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले दुबै अध्यक्षलाई सोधेँ । उहाँहरुले एकीकरणको बारेमा वर्क अन प्रोग्रेस भन्नु भएको छ । भोलि संयोजन समितिको बैठकले टुंगो लगाउनेछ ।’
एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आजै साँझ बस्दैछ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बिस्तारित बैठक पनि बस्दैछ । दुई अध्यक्षबीच के सहमति भयो भन्ने अझै बाहिर आएको छैन ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिशतको आधारमा हुने छैन । माओवादीले समानतामा आधारित एकता हुनुपर्ने भनेको छ । एमालेका २५/३० जना बढी केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।
पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटी पनि सोही अनुसार बन्नेछ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष बाहेक अरु पदाधिकारी हुने छैनन् ।
मदन आश्रति स्मृति दिवसमा माओवादी सहभागी हुने
भोलि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रति स्मृति दिवस हो । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र जीवराज आश्रतिको जेठ ३ गते दासढुंगामा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।
मदन आश्रति स्मृति दिवसको अवसरमा एमालेले गर्ने कार्यक्रममा माओवादी शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइएको छ ।
एमाले र माओवादीले १७ असोजमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा ६०/४० को भागवण्डाका आधारमा उम्मेदवार उठाए । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले ६ वटा प्रदेशमा पनि सरकार बनाए ।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे लगतै ७ फागुनले दुई दलका शीर्ष नेताहरुले पार्टी गरे । एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र निर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद-लेलिनवाद’ हुने सहमाति छ ।
दुई दलले कार्यदल बनाएर अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पनि बनाएका छन् । तर, केन्द्रीय समितिको भागवण्डा लगायतमा सहमति हुन सकेन ।
बरु बेलाबेला दुई दलबीच खटपट देखियो । दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच थुप्रै वान टु वान वार्ता भएपछि एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण नबन्दा एकता हुन सकेको थिएन ।
यही कारण वैशाख ९ मा गर्ने भनिएको एकता हुन सकेन । तर, बुधबारको बैठकमा ब्रेक थ्रू भएको छ ।
दरौँदी लिफ्टिङ खानेपानीको मोडल र महसुलको बारेमा छलफल, मंसीरदेखि पानी वितरण हुने
लामो समयदेखिको प्रतिक्षामा रहेको दरौँदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना मंसीरदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । यसअघि
चिनियाँ संस्थाद्वारा गोरखाका दुई हजार विद्यार्थीलाई झोलाभरि उपहार
एक चिनियाँ सामाजिक संस्थाले गोरखाका दुई हजार विद्यार्थीलाई विभिन्न शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीहरुले भरिएको
नेकपा एमाले गोरखाको वडा अधिवेशन सम्पन्न (को को भए वडाअध्यक्षहरु सूचीसहित)
१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेले शनिबार गोरखा जिल्लाभर वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको
हुम्ला र चीनको सीमानामा धेरै समस्या भेटिए : प्रतिवेदन
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन प्यानलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार हुम्ला जिल्लामा नेपाल चीन सीमामा धेरै समस्याको
नेप्से २६ सय नाघ्यो, कारोबार रकममा पनि सुधार
सुनको मूल्य तोलामा ३०० रुपैयाँले बढ्यो
लुदीखोलाबाट सालको काठ बरामद
आन्तरिक पर्यटकका रोजाइमा प्याराग्लाइडिङ
चीनमा कोरोना भाइरस पुन: फैलिन थाल्यो